Global Voices teny Malagasy » Nataon’i Arabia Saodita Ho Ara-dalàna Ny Fihazonana Tsy Misy Fetra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Desambra 2013 11:32 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika avylavitra
Tany amin'ny Septambra 2012, kaomity iray teo anivon'ny Antenimiera Saodiana Fakàn-kevitra vao avy notendrena no nanolo-levitra hanaisorana ny fetran'ny fihazonana tsy misy fitsaràna , taorian'ny naha-enimbolana ny fara-fahaelany tamin'izany. Efa hatrany no nokianin'ireo mpiaro ny zon'olombelona ilay sosokevitra satria mety hanao izay haha-ara-dalàna ny fanamparam-pahefana amin'ilay antsoina hoe “Ady amin'ny Asa Fampihorohoroana”sy hanokatra varavarana ho an'ny famoretana midadasika be hatao amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Ny fanitsiana natolotra dia hanome fahafahana ny mpitsara hanitatra ny fitànana ho tsy misy fetra na dia tsy misy aza tranga anenjehana ilay voatàna.
Ny 22 Novambra, nankatoavin'ny mpanjaka Saodiana io fanitsiana io ankoatra ireo sasany mamadika azy io ho lalàna nanomboka nanan-kery ny Zoma 6 Desambra.
Hatrizay no efa niteraka fanakianana ny governemanta Saodiana ny olan'ny fitazotazonana tsy misy dikany. Ireo loharano avy amin'ireo mpiaro zon'olombelona tsy miankina dia milaza fa maherin'ny 30.000 no olona voagadragadra foana tsy misy fiampangàna [ar], izay nosamborina tsy misy didy sady tsy manam-pahafahana hahazo mpisolovava na fitsaràna. Ny maro amin'ireny dia tratry ny fisamborana faobe, tamin'ilay hoe “ady amin'ny asa fampihorohoroana” taorian'ny 9/11” 
Nanao fivoriana iray izay nisaoran'izy ireo ny Mpanjaka noho ny nanekeny ireo fanitsiana ireo ny Kaomitin'ny Zon'Olombelona ao amin'ny governemanta. Ny gazety Al Riyadh no nitatitra  [ar] :
Nanamarika ny filankevi-pitantanana fa mizotra amin'ny làlana marina ny fitondran'ny mpanjaka tamin'ny namoahana ireny fepetra telo ireny, mba hampiroboroboana ny zo sy ny fahamarinana, hatramin'ny nijoroany. Nanamarika [ny filankevi-pitantanana] fa ireo fepetra ireo, raha sitrapon'Andriamanitra, dia hanova tanteraka hatrany ifotony ny rafi-pitsarana izay miaro ny zo ary handray anjara amin'ny fanatsaràna ny andrim-panjakana mpanao lalàna izy ireny
Nohazavain'i Mohammad al-Abdualkareem, mpikatroka mafàna fo, ny fiantraikan'ilay fanitsiana natao :
Ny Artikla 114 dia manome fahefana ireo mpitsara hanagadra araka izay tiany sy tsy misy fetra ilay ahiahiana. Mety higadra mandritry ny dimy taona tsy misy fitsarana ny olona iray ary avy eo vao hita fa hoe tsy manantsiny, ary tsy araham-panonerana
Sultan al-Fifi, mpampiasa Twitter, dia nanakiana ilay fanitsiana tamin'ny fitanisàna trangam-pitsarana tany aloha izay nanenjehan'ny mpitsara tsy nisy indrafo ireo mpikatroka mafàna fo ara-politika:
Tsy antoka velively ny fanampiana fepetra amin'ny didin'ny mpitsara mialohan'ny fitànana tsy misy fetra rehefa ny mpitsara no miteny an'i al-Hashmi [mpikatroka mafàna fo ara-politika] : Mendrika anareo [ny hovonoina amin’] ny sabatra, saingy ahenako ny sazy mba ho 30 taona an-tranomaizina
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/08/55442/
 nanolo-levitra hanaisorana ny fetran'ny fihazonana tsy misy fitsaràna: https://globalvoicesonline.org/2012/09/15/saudi-arabia-committee-backs-legalizing-infinite-detention/
 30.000 no olona voagadragadra foana tsy misy fiampangàna: https://www.youtube.com/watch?v=urILE3ttfYs
 dia tratry ny fisamborana faobe, tamin'ilay hoe “ady amin'ny asa fampihorohoroana” taorian'ny 9/11”: https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-human-rights-abuses-name-fighting-terrorism-20090722
 no nitatitra: http://www.alriyadh.com/2013/12/06/article890228.html